Iindaba -I-OIS kunye ne-EIS yekhamera yebhloko yokusondeza
I-OIS kunye ne-EIS yokusondeza iikhamera zebhloko
Uzinzo lweekhamera zedijithali zikhulile, kodwa hayi kwiilensi zekhamera ye-CCTV.
Kukho iindlela ezimbini ezahlukeneyo zokunciphisa isiphumo se-shaky-cam.
Ukuzinziswa komfanekiso osebenzayo usebenzisa izixhobo ezintsonkothileyo ngaphakathi kwelensi ukugcina umfanekiso umile kwaye ubambe ukubanjwa okubukhali. Sekude ixesha elide kubathengi be-elektroniki, kodwa khange yamkelwe ngokubanzi kwiilensi zeCCTV.
Ukuzinza komfanekiso we-elektroniki kungaphezulu kweqhinga lesoftware, ukukhetha indawo echanekileyo yomfanekiso kwisenzi sokwenza ukuba kubonakale ngathi kungumxholo kwaye ikhamera ihamba kancinci.
Makhe sijonge ukuba zisebenza njani zombini, kwaye zisetyenziswa njani kwi-CCTV.
Ukuzinza komfanekiso ophathekayo, obizwa ngokuba yi-OIS ngokufutshane, kusekwe kwiilensi zozinzo ezibonakalayo, kunye nolawulo oluzenzekelayo lwe-PID algorithm.
Iilensi zekhamera ezinomfanekiso ozinzisiweyo wokuqina zinemoto yangaphakathi ehambisa ngokwasemzimbeni enye okanye nangaphezulu kwezinto zeglasi ngaphakathi kwelensi njengoko ikhamera ihamba. Oku kukhokelela kwisiphumo sokuzinza, ukuphikisa ukushukuma kwelensi kunye nekhamera (ukushukuma kwezandla zomqhubi okanye isiphumo somoya, umzekelo) kunye nokuvumela ukubhalwa komfanekiso obukhali, ongacacanga kakuhle.
Ikhamera eneelensi ezinomfanekiso ozinzileyo womfanekiso inokubamba imifanekiso ecace gca kumanqanaba okukhanya asezantsi kunenye ngaphandle.
Icala elibi kakhulu kukuba ukuzinza komfanekiso we-optical kufuna uninzi lwezinto ezongezelelweyo kwiilensi, kwaye iikhamera ezixhotyiswe nge-OIS kunye neelensi zibiza kakhulu kunoyilo oluntsonkothileyo.
Ngesi sizathu, i-OIS ayinasicelo siqolileyo kwi-CCTV zoom block camera.
Ukuzinziswa komfanekiso we-elektroniki
Ukuzinzisa imifanekiso ye-elektroniki kuhlala kubizwa ngokuba yi-EIS kungekudala. I-EIS ibonwa ikakhulu yisoftware, ayinanto yakwenza nelensi.
Ukuzinzisa ividiyo eyoyikisayo, ikhamera inokuwanciphisa amacandelo angajonganga ukuba ahamba kwisakhelo ngasinye kunye nokusondeza kombane kwindawo yesityalo. Isityalo sesakhelo ngasinye somfanekiso sihlengahlengiswa ukuhlawulela ukushukuma, kwaye ubona umkhondo wevidiyo.
Kukho iindlela ezimbini zokufumanisa amacandelo ahambayo.isinye sisebenzisa i-g-sensor, enye isebenzisa isoftware-kuphela ukubona umfanekiso.
Okukhona usondeza, ukuhla komgangatho wevidiyo yokugqibela kuya kuba njalo.
Kwikhamera ye-CCTV, ezi ndlela zimbini azilunganga kakhulu ngenxa yezixhobo ezinqunyelweyo ezinje ngezinga lesakhelo okanye isisombululo senkqubo ye-chip. Ke, xa uvula i-EIS, isebenza kuphela kwiinyikima ezisezantsi.
Sikhuphe ikhamera yokomisa uzinzo lwe-zoom, zoqhakamshelwano sales@viewsheen.com ngeenkcukacha.